के हो नेपालमा ट्रायलका लागि अनुमति पाएको 'एमआरएनए भ्याक्सिन'? [अन्तर्वार्ता] कुनै पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्दा एउटा कुरा त हाम्रै जनसंख्यामा हाम्रै समुदायमा भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा अगाडि नै उमेर समूहदेखि लिएर शीर्षकगत हिसाबले, जेनेटिक हिसाबले सबै कुराहरु पहिले नै हेर्न पाईन्छ। शनिबार, भदौ १२, २०७८
डा अनुप बास्तोलासँग विशेष वार्ता: कोरोना संक्रमण किन कम भएन? तेस्रो लहरको संकेत हो? समुदायमा संक्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। आम सर्वसाधारणले परिवार र समाजलाई कसरी संक्रमणबाट जोगाउने भनेर बुझ्न जरुरी छ। बिहीबार, भदौ ३, २०७८
सरकारले तथ्यांकमा आधारित भएर नीति बनाउन आवश्यक छः किशोर खनाल [अन्तर्वार्ता] अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरु तथ्यांकको भण्डार हुन्। तर तथ्यांकको भण्डार स्वास्थ्य प्रदायक निकायमा हुने तथ्यांकको सहि व्यवस्थापन र प्रयोग भइरहेको छ त? शनिबार, साउन ३०, २०७८
आयुर्वेदको विकासका लागि सरकार कटिबद्ध छैन: डा वासुदेव उपाध्याय [अन्तर्वार्ता] आयुर्वेद औषधि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर र टिचिङ अस्पतालमा नखुवाइनु समन्वयको अभाव हो। अथवा यसलाई अझै विश्वास गर्न नसकेको अवस्था हो। शनिबार, साउन २३, २०७८
तीन महिनाभित्र ह्युमन मिल्क बैंक सञ्चालनमा आउँछ: डा संगीता मिश्रा [भिडियो वार्ता] ह्युमन मिल्क बैंक भनेको के हो? यो बैंक कसरी सञ्चालनमा ल्याइँदै छ? शिशुलाई आमाले कति समयसम्म स्तनपान गराउनु पर्छ? शुक्रबार, साउन २२, २०७८
कोरोना र लकडाउनका कारण एचआइभी नियन्त्रणका काम धेरै पछाडि धकेलियो: डा सुधा देवकोटा (अन्तर्वार्ता) यदी यो नभएपनि लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबैभन्दा धेरै हामीले लुकेर बसेका संक्रमितसम्म पुग्ने पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरुसम्म पुग्ने बाटोमा जहाँ–जहाँ जे–जे बाधाहरु आउँछन्, त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ। बिहीबार, असार ३१, २०७८
डा शेरबहादुर पुनलाई प्रश्न: कोरोनाको डेल्टा भेरियन्टमा भएको म्युटेसन कति जोखिमपूर्ण छ? धेरैले आफूलाई जिउँदै मरेतुल्य जस्तो भएँ भनेर भन्ने गरेका छन्। उनीहरुले अब जीवनमा केही गर्न सक्दिनँ कि? भन्ने जस्तो गरी हरेस खाएका देखिन्छन्। उनीहरुको कुरा निराशाजनक छ। आइतबार, असार १३, २०७८
‘नेपालमा एउटा ट्रमा नेटवर्क बनाउनु आवश्यक छ’ सरकारले अर्थोपेडिक ट्रमालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। हामीसँग अहिले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर मात्र छ। त्यहाँ देशभरका बिरामीहरु उपचारका लागि आउँछ। सामान्य उपचारका लागि पनि टाढा टाढाबाट काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ। बुधबार, असार २, २०७८
औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई प्रश्न: ‘सिटामोल’को अभाव हुन नदिन के गर्दै हुनुहुन्छ? [अन्तर्वार्ता] सर्वप्रथम त म सबैलाई आग्रह गर्छु, अनावश्यक रुपमा औषधि किनेर नराख्नुहोस्। औषधि हो खानेकुरा होइन। चिकित्सकको परामर्श अनुसार आवश्यक भए मात्र किन्नुहोस्। शुक्रबार, जेठ २८, २०७८
नेपालमा खोप लैजाने पहल भइरहेको छ : राजदूत डा खतिवडा खोपको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकाले विदेशी मुलुकलाई दिने पाँच अर्ब डलरको करिब आठ करोड डोज खोपको विषयमा नेपालले पाउने खोप पाउने नै छ। सोमबार, जेठ १०, २०७८
डा जनक कोइरालालाई प्रश्न: कोरोना भाइरसको पिकमा हामी कहिलेसम्म पुग्छौं? यस्तै बेला नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीले नुबझेको होइन। नेतृत्व क्राइसिस म्यानेजमेन्ट होइन, कुर्सी म्यानेजमेन्ट गर्नतिर लागे। ध्यान दिएको भए राम्रो व्यवस्था हुन्थ्यो। मंगलबार, जेठ ४, २०७८
स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीलाई प्रश्न: कोरोना संक्रमितले बेड पाउने अवस्था छ? [भिडियो वार्ता] हामी अझै केही समय अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। त्यसको तयारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय आन्तरिक तयारी गर्दैछ। निषेधाज्ञाका कारण आमजनमा परेको प्रभाव हामीले बुझेका छौ। यसमा हामी तयारी गर्दैछौं। सोमबार, वैशाख २०, २०७८
'हामीसँग कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि चाहिने सबै उपकरण छ' आइसीयूमा भएका नेगेटिभ प्रेसरको सुविधा भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हो। नेगेटिभ प्रेसरसँगै एन्टी रुम छ। जसले संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठूलो भूमिका छ। बिहीबार, वैशाख १६, २०७८
सबै जिम्मेवार नभए केही हप्तामै स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्था आउँछः डा अधिकारी (भिडियोवार्ता) कोरोना संक्रमणको दर कम गर्न सरकारले तोकेका मापदण्ड तथा आदेश पूर्ण रुपमा पालना गर्नु अपरिहार्य रहेको डा अधिकारीको भनाइ छ। बुधबार, वैशाख ८, २०७८
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आइसक्यो: डा गौतम (भिडियोवार्ता) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरू भइसकेको बताएका छन्। बुधबार, वैशाख १, २०७८
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात कसरी भयो? डा हेमाङ्गमणि दीक्षितसँग भिडियो वार्ता बुधबार, चैत ११, २०७७
'कोरोना संकटले औषधि क्षेत्रमा ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ' औषधिमा आत्मनिर्भर हुँदै गयौं भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। नेपालमा कुनै पनि औषधि उत्पादन हुन्थेन भने अवस्था यो भन्दा विकराल हुन्थ्यो। मंगलबार, चैत १०, २०७७
निद्रामा चल्ने, बाेल्ने, हिँड्ने, पिट्ने, घुर्ने वा दाँत किट्ने बानी छ? के यो राेग हो?- योगेश न्यौपाने [अन्तर्वार्ता] शुक्रबार, चैत ६, २०७७
तत्काल भ्याक्सिन आयात नभए खोप अभियान रोकिन्छ : डा टिंकरी [भिडियो वार्ता] बुधबार, चैत ४, २०७७
प्रतिष्ठानमा डिन र अस्पतालमा निर्देशक हुने गरी छाता ऐन आउनु राम्रो हो : प्राडा बुद्धिबहादुर थापा [अन्तर्वार्ता] मैले यो ४ वर्षको कार्यकालमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थापक उपकुलपतिको हैसियतले काम गरेँ। यो ४ वर्षको अवधिलाई नियाल्दा मैले पाएको जिम्मेवारीलाई मैले ९५ प्रतिशत पूरा गरेँ। मंगलबार, चैत ३, २०७७
नेपालले ल्याबमा एमआरए मान्यता पायो– सरकार, डाक्टर र बिरामीलाई के फाइदा? डा केयुर गौतमसँग भिडियो वार्ता एमआरए मान्यता पाउनु भनेको कस्तो हो? नेपालले एमआरए मान्यता प्राप्त देशको सूचीमा कसरी पर्‍यो? राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मेडिकल ल्याबलाई दिने मान्यता र यो एमआरए मान्यताबीच के फरक छ? सोमबार, फागुन २४, २०७७
फार्मेसी पेशामा धनी र फर्मासिस्ट फरक हुँदा विकृति बढ्यो : रजिष्ट्रार संजिव कुमार पाण्डेय हामीले यो भनेका छैनौं की जसले पसल दर्ता गरेका छन्, उही नै पसलमा बस्नुपर्छ। फार्मेसी दर्ता गरेका व्यक्तिले आफ्नो अनुपस्थितिमा कमसेकम फर्मासिस्ट त राख्नुपर्‍यो नी। औषधिको बिक्रि वितरण फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकबाट नै हुनुपर्छ। हाम्रो वकालत पनि यही नै हो। बिहीबार, फागुन १३, २०७७
विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया आयोगको सिस्टमले गर्छ, अरुसँग समन्वय आवश्यक छैन : प्राडा श्रीकृष्ण गिरी [अन्तर्वार्ता] परीक्षा वा म्याचिङको कुरामा कसैको पनि वा आयोगकै पनि व्यक्तिगत भूमिका छैन। त्यो सबै हाम्रो सिस्टमले गर्ने हो। यसमा विद्यार्थी आफैंले आफूले चाहेको शिक्षण संस्था र आफ्ना विषय अनलाइनमार्फत भर्ने व्यवस्था हामीले गरेका थियौं। बुधबार, फागुन १२, २०७७
डाक्टरको ओपिडी शुल्क किन बढाउनु पर्‍यो? डा लोचन कार्कीसँग भिडियो वार्ता ओपिडीमा चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ३७० देखि ८२५ सम्म शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय भएको छ।चिकित्सकले बढाएको शुल्कको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोधका स्वरहरु आउन थालेको छ। आइतबार, फागुन ९, २०७७